हृदय वाल्व को आरोपण
हृदय र circulatory सिस्टम धेरै जटिल छन्। फलस्वरूप, अक्सर धेरै गम्भीर वा जीवन खतरामा पार्ने हो जो धेरै रोगहरु, छन्। विश्वको मा मृत्यु को सबै भन्दा साधारण कारण एक मरिरहेका छन् हृदय रोग।
हृदय को thorax को बायाँ तर्फ स्थित एउटा खोक्रो पेशी अंग हो। हृदय को circulatory सिस्टम को एक मुख्य भाग हो। यो शरीर भर सार्न रगत गराउँछ कि एक रगत पम्प रूपमा कार्य।
बायाँ र दायाँ: विभाजन हृदय दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। बारी मा, प्रत्येक पक्ष माथिल्लो भाग वा Atrium र तल्लो भागमा, वा ventricle विभाजन गरिएको छ। तसर्थ, मानव हृदय चार cavities छ:
हृदय वाल्व यी cavities जडान र आफ्नो प्रभाव वाल्व दुवै पक्षलाई दबाब फरक निर्भर छ। हृदय चक्र खोल्ने र बन्द - दिल को cavities को दबाव भेरिएसनहरूमा, को वाल्व को एक निष्क्रिय आन्दोलन हो।
Atrioventricular वाल्व, वा looped flaps, गुहा आलिन्द बाहिरु निलय cavities अलग।
पाक्षिक वाल्व परिसर महाधमनी र पल्मोनरी ट्रंक गर्ने अधिकार ventricle गर्न बायाँ ventricle छ।
वाल्व रूपमा लामो तिनीहरू दोष मुक्त छन् रूपमा यसको समारोह कार्य गर्दछ।
दोष वाल्व या त जन्मजात हुन सक्छ, वा अक्सर rheumatism परिणामस्वरूप, रोग को कारण प्राप्त गर्न सक्छ।
वाल्व अपर्याप्तता र प्रतिबन्ध प्वालहरू वा stenosis: त्यहाँ रोगहरू वाल्व दुई प्रजातिहरू छन्।
जब विफलता वाल्व को, को वाल्व छैन राम्रो बन्द छन् र रगतको फिर्ता भाग मा, उदाहरणका लागि, बग्छ को Atrium वा ventricle फिर्ता बायाँ ventricle गर्न महाधमनी बाट। फलस्वरूप, हृदयको cavities कति रगत accumulates र शरीर आवश्यक रकम मा प्राप्त गर्दैन।
रगतको Stenosis गाह्रो प्वालहरू बाहिर बग्छ।
बन्द गर्ने सही समय र खुला मा - दिल को वाल्व यसको कार्य गर्न धेरै ठीक हुनुपर्छ। को वाल्व अब यो कार्य प्रदर्शन गर्दा रोग हुन्छ। रोग रक्त मा कठिनाई कारण। कहिलेकाहीं एक सुनिंनु छ हृदय वाल्व, को hinged flaps कि हृदयको सामान्य कामकाज हस्तक्षेप जीवाणुहरु प्रकार जब। यो रोग भनिन्छ जीवाणु endocarditis। हृदय वाल्व को रोगहरु अक्सर surgically व्यवहार - सञ्चालनको माध्यम द्वारा कमजोरीहरू हटाउने द्वारा।
अक्सर प्रतिस्थापन वा वाल्व पुनर्स्थापना सर्जरी प्रयोग। प्रतिस्थापन वाल्व को मामला मा प्रयोग प्रत्यारोपण, कृत्रिम प्रत्यारोपण वा जनावर हो।
यदि हृदय वाल्व को पहिले आरोपण मात्र surgically को छाती खोलेर र एक हृदय-फोक्सो मेसिन रोगी जडान, तर अब वैज्ञानिकहरू, यो सम्भव एक न्यूनतम इनवेसिव तरिका मा एक हृदय वाल्व प्रत्यारोपण गरिएका छन् बाँया मा छाती मा एउटा सानो चीरा बनाउन गरेको छन्। वाल्व आरोपण एक विशेष कैथिटर प्रयोग गरेर हृदयको अन्तिम भाग मार्फत र विशेष बल मार्फत गरिन्छ, नयाँ वाल्व पुरानो ठाउँमा सम्मिलित छ।
सर्जरी को यस प्रकार यस्तो फरक concomitant रोगहरु, वा एनेस्थेसिया को एक उच्च जोखिम संग विरामीहरु संग विरामीहरु वृद्ध रूपमा उच्च-शल्य-जोखिम समूह मा विरामीहरु को फाइदा छ। हृदय शल्य चिकित्सक मा विशेषज्ञहरु प्रत्येक मामलामा फरक छ किनभने हृदय वाल्व प्रतिस्थापन गर्न सर्जरी, बाहिर गर्न दुवै विधिहरू द्वारा जारी हुनेछ भन्ने महसुस। निकट भविष्यमा सर्जन मा एक खुट्टा धमनी मार्फत अगाडी अर्को चरण र प्रत्यारोपित हृदय वाल्व बनाउन योजना।
सबै भन्दा राम्रो क्लीनिक को सबै भन्दा राम्रो मा आवश्यक छ भने आफ्नो हृदय स्थितिको बारेमा, परामर्श र उपचार को सबै भन्दा राम्रो प्रकार निर्धारण। हृदय रोग को गुणवत्ता उपचार जर्मनी मा हृदय केन्द्र बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो देश बारम्बार उपचार को आधुनिक तरिका मा सबै भन्दा राम्रो को रूपमा यसको प्रतिष्ठा सिद्ध भएको छ।
Oncologic Dispensary 4: चिकित्सा संस्थाहरु को गतिविधिहरु
"PLES" अस्पताल। क्षयरोग अस्पताल "PLES" इभ्यानोभो क्षेत्र फोटो संग को समीक्षा
मस्को मा स्थित Endocrinology केन्द्र कहाँ छ? मास्कोमा इन्डोकोनोलोजी केन्द्रहरू (प्रतिक्रियाहरू)
Kuntsevo मा केन्द्र Dikul: समीक्षा, ठेगाना, फोन
"Assuta" चिकित्सा केन्द्रमा उपचार
प्रोस्टेट क्यान्सर - इस्राएलमा प्रोस्टेट ट्यूमर को उपचार
Bachata - यो मान्छे को दुई सँगसँगै भावना खोल
कालो Borodino रोटी: नोक्सानी र लाभ, को संरचना र गुण
विशेषताहरु, गुण, वर्गीकरण प्रकार र paperboard
रसूल Gamzatov: जीवनी, रचनात्मकता, परिवार, फोटो, र उद्धरण
संसारमा सबै भन्दा ठूलो जंगी जहाज। द्वितीय विश्व युद्ध को सबै भन्दा ठूलो जंगी जहाज
को हिप संयुक्त दुखाइ को उपचार
ग्रेनेडा कहाँ छ, त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
कानूनको ऐतिहासिक विद्यालय: कारणहरू, प्रतिनिधिहरू, मुख्य विचारहरू
ढोका: परमवीर चक्र वा काठ
रूस Anomalous क्षेत्र को बर्मुडा त्रिकोण, जिब्राल्टर को एक वेज, सागर शैतानको संग घटना को विलक्षणता मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन् ...
Bebeton - घुमक्कड, आफ्नो बच्चाहरु को लागि र आमा को लागि सजिलो